လိင်မှုဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့် ဦး နှောက်အန်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှုအကြားဆက်နွယ်မှု (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn On
လိင်မွတ်မပြေခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor (2007) အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
comments: လိင်မောကြွက်များတွင်အန်ဒရိုဂျင် receptor ကျဆင်းမှုအတည်ပြုတစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု။ အဆိုပါလေ့လာမှု 72 နာရီအားဖြင့်ပုံမှန်ပြန် receptors ကိုတွေ့ပေမယ့်အပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်အပြည့်အဝကိုပြန်သွားဖို့ 15 ရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ အခွားသောအချက်များ 15 နေ့ရက်ကာလအဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်
Romano-တောရက်စ်က M, Phillips က-Farfán BV, Chavira R ကို, Rodriguez-Manzo, G, Fernandez-Guasti အေ
Neuroendocrinology ။ 2007; 85 (1): 16-26 ။ EPub 2007 ဇန်နဝါရီ 8 ။
Pharmacobiology ဌာန, Centro က de Investigación y က Estudio Avanzados, မက္ကစီကိုစီးတီး, မက္ကစီကို။
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့မွတ်မပြေနိုင်သောရန်သုတ်ရည်ထိပြီးနောက် 24 ဇ, အ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) နှင့် ventromedial hypothalamic နျူကလိယ (VMH) တွင်အန်ဒရိုဂျင် receptor သိပ်သည်းဆ (ARD) တွင်တစ်ဦးလျော့ချရေး, ရှိကွောငျးတငျပွခဲ့သ ဒါပေမယ့်မ stria terminalis (BST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု ARD ဤအခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော medial amygdala (MEA) နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum ကဲ့သို့သောအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများ, ventral အပိုင်း (LSV) တွင်ပြောင်းလဲရှိမရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အထီးကြွက် immunocytochemistry အားဖြင့် ARD ဆုံးဖြတ်ရန် 48 ဇ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီး 72 ဇသို့မဟုတ်7ရက်ပေါင်း (4 ဇကြော်ငြာ libitum သုတ်ရည်ထိ) ယဇျပူဇျောကြသည် ဟူ. ၎င်း, ထို့အပြင်သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်လွတ်လပ်သောအုပ်စုများအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် testosterone ဟော်မုန်းအတူတူပင်ကြားကာလမှာယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ အခြားစမ်းသပ်မှုများတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 48 ဇ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီး 72 ဇသို့မဟုတ်7ကာလ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ရလဒ် 48 ဇလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီးယောက်ျား၏ 30% တစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ပြသနှင့်ကျန်ရှိသော 70% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပြီးပြည့်စုံတားစီးပြသကြောင်းပြသ.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၌ဤလျော့ချရေးအတွက် MPOA-medial အပိုင်း (MPOM) တွင်သီးသန့်လျော့ကျတစ်ဦးက ARD ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ခုနစ်ဆယ်နှစ်နာရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောပြီးနောက် MPOM အတွက်အဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန် ARD တစ်ခုတိုးနှင့် LSV, BST, VMH နှင့် MEA အတွက် ARD တစ်ခု overexpression ဖြင့်လိုက်ပါသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူရှိခဲ့.
သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် Post-မွတ်မပြေနိုင်သောကာလအတွင်းပြုပြင်မထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် ARD အကြားတူညီနှင့်ကှာဟများ၏အခြေခံပေါ်မှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။